Howlgal Balaaran oo Muqdisho ka dhacay & 600-ruux oo la qabtay – XAMAR POST
Howlgal Balaaran oo Muqdisho ka dhacay & 600-ruux oo la qabtay
By Mohamed Ahmed Last updated Sep 25, 2017
Howlgalkan ayaa Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay xalay ka sameeyeen Xaafadaha ku teedsan Wadada Warshadaha ee Gobolkan Banaadir qeybta degmada Yaaqshiid.
Ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa la arkayay iyaga oo baaritaano ka sameynaya Xaafada Ceysmiska ee degmada Yaaqshiid gaar ahaan inta u Dhaxeysa Carafaad ilaa EX Koontorool Balcad.
Gudoomiyaha Maamulka degmada Yaaqshiid Axmed Geedoow ayaa sheegay in howlgalkaas uu ahaa mid lagu xaqiijinayay dhanka amniga isla markana lagu qabqabtay 600 00 ruux oo dhalinyaro u badan.
“Howlgalku waxa uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay ciidamada dowladda ayaana sameynayay Guryaha ayaa la baarayay waxana howlgalkaas ku qabanay tiro dad ah oo dhalinyaro u badan kuwaas oo gaaraya ilaa 599 Ruux haddana baaritaano ayaad ku wadnaa ayuu yiri Gudoomiye Axmed Geedoow”
Sidoo kale Gudoomiyaha ayaan weeydiinay Su’aal aheyd maadaama howlgalka laba habeen oo iskuxigta degmada laga sameeyay in ay jiraan hub lagu soo qabtay ayaa waxa uu ku jawaabay.
“Walaahi howlgalka waxyaabihii lagu soo qabtay laamaha amniga inaan la wadaagno ayay ku fiicneyd balse waxaan kuu sheegayaa in uu ahaa mid qorsheysan oo u dhacay sidii loogu talo galay ayuu ku soo gaba gabeeyay hadalkiisa gudoomiyaha degmada Yaaqshiid”
Mareykanka oo mamnuucay dadka 8-dal, Somalia oo ku jirta & Sudan oo laga saaray
Madaxweyne Farmaajo oo si deg deg ah uga hadlay Guusha Angela Merkel